ဂျာဗား ဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
၈၂ million (2007)
jav – ဂျာဗား
ဂျာဗား ( /dʒɑːvəˈniːz/ ;  ꦧꦱꦗꦮ basa Jawa ၊ အာရဗီ: باساجاوا; အသံထွက် ꦕꦫꦗꦮ, cara Jawa ဟုလူသိများသည် )အင်ဒိုနီးရှား ရှိ ဂျာဗား ကျွန်း၏ အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းမှ ဂျာဗားလူမျိုး တို့၏ ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဂျာဗားအနောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းတွင်လည်း ဂျာဗားစကားပြောသောနေရာများ ရှိသည်။ လူဦးရေ ၉၈ သန်းကျော်၏ မိခင်ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ (အင်ဒိုနီးရှား၏ စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၄၂% ကျော်ရှိသည်) ။
၂ အသံထွက် သင်္ကေတ
[[ဖိုင်:Aksara_Jawa_-_jawa.png|thumb| ဂျာဗား အက္ခရာဖြင့် ရေးသားထားသော ဂျာဗား ава ဟူသောစကားလုံး ခေတ်သစ်ဘာသာစကားသုံးမျိုး ရှိသည်။ အလယ်ဂျာဗား၊ အရှေ့ဂျာဗားနှင့်အနောက်ဂျာဗား ထိုသုံးမျိုးတွင် ပြောဆိုသုံးစွဲသူ ဆက်တိုက် ရှိပြီး ဂျာဗားအနောက်ဘက်စွန်းရှိ Banten မှသည်အရှေ့ဘက်ထောင့်ရှိ Banyuwangi Regency အထိဖြစ်သည်။ ဂျာဗားစကားအားလုံးသည် အပြန်အလှန်နားလည်နိုင်သည် ။
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းခေတ်သစ်ဂျာဗား ၏ အသံထွက် ပုံစံများ
ခါးပန်းကိုလက်ယာပခုံးမှ ညာဘက်သို့ သိုင်း၍ဝတ်ဆင်ထားသည့် ၐုရာကာတာဘုရင် ၐုၐုဟုနန် ပါကူဝိုနို ၁၀၏ ပုံတော်ဘုရား။ ဆူရာကာတာ သည်ဂျာဗားယဉ်ကျေးမှု၏အချက်အချာနေရာဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်း၏စကားသည် သန့်စင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ရစ်သည်။
Majuscule ပုံစံများ ( စာလုံးအကြီး )
အသေး အဖွဲပုံစံများ ( စာလုံးအသေး )
အ ဘ စ ဒ ဓ အ အ အ ဖှ ဂ၊ ဂျ ဟ ဣ
ဂျ က၊ခ လ၊
မ န င ည အို ပ ကျ ရ
၏ တ သ၊ထ ဥ၊ အု ဗ ဝ အ ယ ဇ
ဟ န စ ရ က ဒ တ သ၊ၐ၊ၑ ဝ လ ပ ဓ ဇ ယ ည မ ဂ ဘ သ င
၁၉၈၀ သန်းခေါင်စာရင်းအရဂျာဗားနီးယားကိုနေ့စဉ်အိမ်ထောင်စုများ၏ ၄၃% တွင်နေ့စဉ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤတွက်ချက်မှုအရဂျာဗားစကားပြောသူသန်း ၆၀ ကျော်သည်နိုင်ငံလူ ဦး ရေ ၁၄၇,၄၉၀,၂၉၈ မှ  ဖြစ်သည်။  [မှတ်စု ၁]
[[ဖိုင်:Java_languages.JPG|thumb| ဂျာဗား ၊ မာဒူရာနှင့် ဘာလီ ဘာသာစကားများဖြင့်ပြောဆိုသောဘာသာစကားများ၏ဖြန့်ဝေခြင်းမြေပုံ ]]
ဟုတ်တယ် အီယို inggih or nggih 
မဟုတ်ဘူး အော်ရာ boten
ဘာလဲ ဩပေါ် ပုပ္ပား
ဘယ်သူလဲ ဆောပေါ် sinten
ဘယ်လိုလဲ ကပရီရေသို့မဟုတ် ကပီရေ kados pundi သို့မဟုတ် pripun
အဘယ်ကြောင့် nangapa သို့မဟုတ် ngapa kènging punapa
စားသည် မန်းဂန် နတ်သမီး
အိပ်ပါ နင် saré
ဒီမှာ ဩစတြေးလျ riki သို့မဟုတ် mriki ing
အဲဒီမှာ kana အပေါ် rika သို့မဟုတ် mrika ing
ရှိပါတယ် (ရှိပါတယ်) ana မင်္ဂလာပါ
မရှိ (မရှိ) ora ana boten wonten
မဟုတ်ဘူး! သို့မဟုတ် ငါကမလိုချင်ကြဘူး! လူ ရေ
အပျော်အပါးအဘို့အအလည်အပတ်ခရီးပါ dolan amèng-amèng
ဂျာဗားဘာသာစကား ငိုကိုစကားဘယ်ဘက်တွင်ရှိပြီး ဂျာဗားကရာမာမှာညာဘက်တွင်ရှိသည်။
၀ ꧇꧐꧇ nul nul ဒတ်ခ်ျဘာသာမှ တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာသည်။
၁ ꧇꧑꧇ siji satunggal
၂ ꧇꧒꧇ loro kalih
၃ ꧇꧓꧇ telu tiga
၄ ꧇꧔꧇ papat sakawan
၅ ꧇꧕꧇ lima gangsal
၆ ꧇꧖꧇ enem enem
၇ ꧇꧗꧇ pitu pitu
၈ ꧇꧘꧇ wolu wolu
၉ ꧇꧙꧇ sanga sanga
၁၀ ꧇꧑꧐꧇ sapuluh sadasa
၁၁ ꧇꧑꧑꧇ sawelas satunggal welas
၂၀ ꧇꧒꧐꧇ rong puluh kalih dasa
၂၁ ꧇꧒꧑꧇ salikur satunggal likur
၂၂ ꧇꧒꧒꧇ rong likur kalih likur
၂၃ ꧇꧒꧓꧇ telunh likur tigang likur
၂၄ ꧇꧒꧔꧇ patang likur sakawan likur
၂၅ ꧇꧒꧕꧇ salawé salangkung
၂၆ ꧇꧒꧖꧇ enem likur enem likur
၂၇ ꧇꧒꧗꧇ pitung likur pitung likur
၂၈ ꧇꧒꧘꧇ wolung likur wolung likur
၂၉ ꧇꧒꧙꧇ sangang likur sangang likur
၃၀ ꧇꧓꧐꧇ telung puluh tigang dasa
၃၁ ꧇꧓꧑꧇ telung puluh siji tigang dasa satunggal
၄၀ ꧇꧔꧐꧇ patang puluh sakawan dasa
၄၁ ꧇꧔꧑꧇ patang puluh siji sakawan dasa satunggal
၅၀ ꧇꧕꧐꧇ sèket sèket
၅၁ ꧇꧕꧑꧇ sèket siji sèket satunggal
၆၀ ꧇꧖꧐꧇ sawidak sawidak
၆၁ ꧇꧖꧑꧇ sawidak siji sawidak satunggal
၇၀ ꧇꧗꧐꧇ pitung puluh pitung dasa
၈၀ ꧇꧘꧐꧇ wolung puluh wolung dasa
၉၀ ꧇꧙꧐꧇ sangang puluh sangang dasa
၁၀၀ ꧇꧑꧐꧐꧇ satus satunggal atus
၁၀၀၀ ꧇꧑꧐꧐꧐꧇ sèwu satunggal èwu
ဆူရာနမ်မှဂျာဗားနီးယားမှ ဂျာကာတာ စာမူ၏မူလအစကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းသည်
ဂျာဗားအက္ခရာ (Unicode A980 — A9DF)
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Javanesic"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျာဗား_ဘာသာစကား&oldid=698845" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။